ရက်သတ္တပတ်၏ဝေဖန်မှု - အပိုင်း ၁ - သတင်း
ရက်သတ္တပတ်၏ဝေဖန်မှု - အပိုင်း ၁
ဘီဘီစီစီးရီး 'Clique' သည်ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့ဒုတိယမြောက်စီးရီးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်သားပြင်သို့ပြန်လာပြီး Edinburgh uni တွင်အခြေစိုက်ပြီး၎င်း၏တန်ဖိုးရှိသောသောကြာနေ့ညစာစားပွဲကိုစွန့်လွှတ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်။ ) ပျော့သွားတာကိုအကြောင်းပါ။
အခုတော့လက်တွေ့ကျကျ၊ ပထမစီးရီးတွေအားလုံးကိုအမီလိုက်နိုင်ခြင်းဟာကျွန်တော့်ရဲ့သတင်းစာစွမ်းရည်ထက်ကျော်လွန်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ငါအရေးကြီးတဲ့သုတေသနအချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။
ပြပွဲ၏ပြန်လာ၏ Tab ၏ကြေငြာချက်တစ်ခုအဖြစ်စီးရီးဖော်ပြသည် 'လိင်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လူသတ်မှုနှင့်ပြည့်ဝ၏အဓမ္မသွေးထွက်သံယို။ ငါမုသားမဟုတ်ဘူး။ ချယ်လ်ဆီးတွင်လုပ်သည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်း Hadrian's Wall အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ (MIC ကိုမမြင်ဖူးသကဲ့သို့ဖြစ်ဆဲဖြစ်မည်) ထို့ကြောင့်ငါပထမ ဦး ဆုံး ep မထွက်ခင်ငါ့ကိုပစ်ချလိုက်သည်။ ။
Tatto Shit နဲ့မင်းပျော်နေမှာပဲလို့ဟန်ဆောင်နေတယ်
ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်အတိုင်း, ကောင်းသောစီးရီးတစ်ခုရဲ့သော့ချက်အဓိကအကြောင်းအရာညှိနှင့်ခေါင်းစဉ် sequence ကို (Narcos, Peaky Blinders, etc ကြည့်ပါ) ။ Clique သည်ချော်ရည်မီးခွက်အမျိုးအစားမြင်ကွင်းအတွင်းရှိလူများ၏ပုံရိပ်များဖြင့်စတင်သည်။ လူ ဦး ရေအချိုးအစားမှာ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း ၁၆ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီးကလပ်တွင်သင်ကြားရမည့်ကြောက်မက်ဖွယ်အကများဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုသည်။
ဤဖြစ်စဉ်သည်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သောလူတစ် ဦး မှထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်စတင်သည်။ ပါတီပွဲတစ်ခု၏ထူးခြားသော gaff သို့ချက်ချင်းမသွားမီနေ့လည်ခင်းလက်ဖက်ရည်ကြမ်းအတွက်လျင်မြန်သော gaff ကိုကျွန်ုပ်တို့လျင်မြန်စွာသွားသည်။ လူတွေကငါထွက်လာပြီနှင့်ငါမဟုတ်ဘဲရေနံစိမ်းတွေ့ရှိခဲ့သောနေ့၏ပါတီအလယ်၌ခေါင်းကိုပေးခြင်းရှိပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်စရာ, လွန်စွာမှအစပြုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ကောလိပ်ဟောင်း၏နှစ်သိမ့်မှုနှင့်ရင်းနှီးမှုသို့ပြောင်းသွားသည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီမြင်ကွင်းကပြသခြင်းရဲ့အဓိကဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပုံရသည့် ၀ တ်ပြုဆင်ယင်မှု၊
ပြproblemနာသင်ကြားရေးပစ္စည်းများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်နေရာများနှင့်သတိပေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ဘီဘွမ်ဘီစီအမှုဆောင်များသည်ကျောင်းသားများနှင့်တူသည်ဟုမှားယွင်းစွာထင်မြင်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား, ငါ့ Tab ကိုသုတေသနငါ့ကိုပြောပြသည် '' ဒီနေ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလူငယ်များရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုပြissuesနာများ '' ဖြစ်ရမည်
ဒုတိယစီးရီး၏အဓိကအင်္ဂါရပ်ဖြစ်မည့် alt-right သန္တာကျောက်တန်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။
Twitcher အတွက်အကြောင်းအရာဖန်တီးရန်ဤအခါသမယတွင်သူတို့သည်စက္ကူနှင်းခဲအချို့ကိုအောက်ဖော်ပြပါညည်းညူကျောင်းသားများအားမည်မျှလိမ္မာပါးနပ်စွာပစ်ချကြသနည်း။ ဒီစိတ်ကူးယဉ်ဘလော့ဂ်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်မရှိသူများအတွက် Tab ကိုစဉ်းစားပါ၊ ဒါပေမယ့် Pepe memes post လုပ်တဲ့သူတွေက run ပါ။
ဒီသဲကန္တာရမင်းများဖြစ်ခြင်းနှင့်အုပ်စုလိုက်နှေးကွေးသောလမ်းလျှောက်ခြင်းအကြားသူတို့၏အချိန်ကိုကွဲစေခဲ့သည်။ သူတို့က 'Right-wing provocateur' ကိုရပြီးအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုမှာစကားပြောခွင့်ရတယ်။ ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကလူတွေကိုမိုက်ခရိုကျူးကျော်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမေးတယ်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ငွီးငှေ့ဖှယျ bellends ။
အဘယ်ကြောင့်မထိုက်မတန်သူများသည်အစဉ်အမြဲလိင်တူချစ်သူ (သို့မဟုတ် alt-right psychos) များမှာ!
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဂျက်ခ်သည်ဘဏ်လုပ်ငန်းအရှုပ်အထွေးအချို့ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးသူမအွန်လိုင်းပေါ်ရှိလက်ဝဲယိမ်းများနှင့်အတူနေထိုင်သောအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်အမျိုးသမီး Holly ကိုလိုက်ဖမ်းနေသည်။ ဘယ်ဘက်တောင်ပံကျောင်းသားအမျိုးအစားကိုလိုက်ဖမ်းနေသည့်လှပသော Tommy Robinson သည်ခေတ်သစ်နေ့ Romeo နှင့် Juliet ဖြစ်သည်။
ဒီပြပွဲကclichéd nonsense နဲ့အတူ 'libtards' ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမှားယွင်းတဲ့ sheeple ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှားယွင်းစွာထိန်းသိမ်းထားတဲ့စာလုံးကိုသုံးခြင်းဖြင့်မင်းပုံကိုရပါတယ်။
အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုမဖွင့်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏စုံတွဲတစ်တွဲသော်လည်းရှိပါသည်။ ဒါဟာ Holly တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသတ်ထွက်လှည့်! ဘယ်သူသိလဲ ကောင်းပြီ, ငါတို့ယခုသူမတစ် ဦး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခိုလှုံခွင့်အတွက်သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးရဲ့။ ကျနော်တို့ကရအဖြစ်အကြောင်းပိုမို။
ထို့အပြင်အလွန် 'GCSE အင်္ဂလိပ်စာစီစာကုံး' ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် Holly ၏အဖော်များသည်ကမ်းခြေပါတီမှပြန်လာသည့်လမ်းပေါ်တွင်စော်ကားခံရပြီးနောက်ချောက်ကမ်းပါးနှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ထဲမှတစ်ယောက်သည်ပြပွဲကိုအဆုံးသတ်ရန်အဝတ်အချည်းစည်းထွက်ပြေးသွားသည်။ ။
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်ရက်စက်စွာချေမှုန်းခြင်း၏သားကောင်များဖြစ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤတိုက်ခိုက်မှု၏တည်နေရာကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါသလား။ ကမ်းခြေမှာပါတီတစ်ခု ...
ညာဘက်ကျော့ကွင်းဖြစ်သည့်အပြင်ဤသန္တာကျောက်တန်းသည်ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိအိမ်တစ်လုံးတွင်နေထိုင်ရန်နှင့်အစောပိုင်းက ၀ တ်စုံများကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည့်ညနေခင်း၌အိမ်ပြင်တွင်ပါတီပွဲများကျင်းပရန်ရဲရင့်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ဤပြပွဲသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှ Portobello သို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းမရှိသောနေရာတွင်ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ ငါမယုံ၏ဆန္ဒရှိရပ်ဆိုင်းမှုသတိထားမိပေမယ့်အပေါ်လာကြ၏။
ဒီတော့ငါစီးရီးတစ်ခုပေါ်တက်မီဖို့လုံလောက်တဲ့စိတ်အားထက်သန်လား? ဘုရားသခင်မရှိ စနေနေ့ကဇာတ်လမ်းတွဲနှစ်ခုကိုကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါသလား။ သင်သည်သင်၏တနင်္ဂနွေကိုခံစားချင်လျှင်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပေမဲ့လည်းငါဟာဇွဲရှိရှိဂျက်၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတဲ့ Holly နဲ့အခြားအရာတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအချက်အလက်တွေနဲ့အတူငါဆက်လုပ်မယ်၊ နောက်အပတ်မှာပြန်လာမယ်